Guys, why aren't we talking about the Coronavirus? - Page 17 - Politics - Somali Forum - Somalia Online
Wacyi-gelinta cudurka Corona:
Fariin ku socota hooyada nuujineysa ilmaha iyada oo qabta cudurka COVID-19.
Gobolka Banaadir ayaa laga xaqiijiyay 24 xaaladood, Maamulka Puntland 8 xaaladood iyo Maamulka Somaliland 3 xaaladood. Wadarta guud ee xaaladaha cusub ayaa noqoneysa 1089 xaaladood, waxaa geeriyooday 1 bukaan sidoo kale waxaa bogsooday 3 bukaan.
Dr. Maxamed Maxamud Cali (Fuje) Lataliyaha Sare ee Wasaaradda Caafimaadka ayaa dhambaal u diray dhalinyarada isagoo yiri ‘’ Isbadbaadi oo badbaadi waalidkaa’’ iyada oo macnaheeda tahay inaad naftaada ka taxadartid oo aad iska ilaaliso, badbaadi waalidkaa oo ha noqonin mid u gudbiyo caabuqa waalidkiisa iyadoo keeni karto inaad waalidkaa uu saameeyo cudurka.
Sidoo kale wuxuu u diray fariin iskaashatada gaadiidleyda asagoo ku booriyay in ay ka qeyb qaataan xakameynta caabuqa ayna ka dhigaan shuruud in dhamaan rakaabka ay soo qaataan af-xir.
Wuxuu sii adkeeyay fatwadii culumada Soomaaliyeed in imaamada masaajidda dhaqangeliyaan maadaama ay aheyd qaab ka mid ah xakameynta faafidda caabuqa.
Wuxuu ku daray daryeelka waalidka ama dadka waayeelka ah in ay si gaara loo daryeelo aysan bulshada soo dhaxgelin, hadey dan yeeshaan aysoo xirtaan af-xir dadkana ka fogaadaan.
Maamulka Isbitaalka Martiini oo ah isbitaal gaar u ah la tacaalidda cudurka Coronavirus ayaa shaaciyay in 42 bukaan oo kamid ah kuwa xaaladahoodu adkaayeen ay bogsoodeen oo haatan isbitaalka laga saaray. Dadkaas 34 kamid ah waxay ahaayeen rag, halka sideeda kale ay dumar ahaayeen.
Ku dhawaad 40 kamid ah ciidamada Amisom oo laga helay Covid19
Ilo wareedyo katirsan howlgalka midowga afrika ee Somalia ayaa u sheegay The EastAfrican in ilaa iyo hada la xaqiijiyey 30 kiis oo katirsan ciidamada Ugandha iyo 7 kamid ah ciidamada Burundi.
Kiisaska degdegga ah ee 'Covid-19' ee Soomaaliya ayaa u diidaya nabad-ilaaliyayaasha Howlgalka Midowga Afrika hawlgallada muhiimka ah ee ka dhanka ah kooxda al-Shabaab.
Amisom waxay leedahay ciidamo ka socda Ethiopia, Kenya, Djibouti, Uganda iyo Burundi.
Askarta Amisom ee xanuunka laga helay ayaa lagusoo waramayaa inay kusugan yihiin xerada Xalane, xaaladooda caafimaadna waa arin sirdoon militari ah.
Tan iyo markii uu bilowday Covid-19, Amisom waxa ay hoos u dhigeysay howlgaladeeda dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, waxayna kaliya ka fulinayaan howlo muhiim ah xaafado ka tirsan shabeelaha Hoose, iyagoo ka fogaanaya in uu cudurku saameeyo.
Horraantii toddobaadkan, Cabdirisaaq Yuusuf Axmed, oo hogaaminaya kooxda wax la tacaalida Covid-19 ee Soomaaliya, ayaa adduunka uga digay inay jiri karaan kumanaan kiis oo aan laga warqabin dalka.
Why are people spreading rumours about this useful hospital? Ilaahay ha caafiyo dadka ku jira.
Unfortunately dad ayaa mucaaradnimo qalad ka fahamsan people were spreading rumours on Facebook saying people were dying because of the ventilators
Here is one example of this guy who was spreading rumours.
Suuxdinta bukaanada qabo Covid19. Ehelada dad qaar ayaa qabo in suuxdinta la galiyay bukaano ay keeneen isbitaal Martini ay sababtay in ay geeriyoodaan bukaano qabay Covid 19. Ehelada ayaa noo sheegay in ay bukaanka markii la suuxiyo si loogu xiro mashiinka maamulo neefta ay suuxdinta dawada loo isticmaalay u dhintaan dadka. Marka qofka la suuxinayo ayaa loo baahan yahay in uu sameeyo qof leh taqasus suuxdinta ah oo gaar ah iyadoo la eegayo, tabarta qofka la suuxinayo, cudurada uu qabo, cadadka daawado uu jirkiisa loo isticmaali karo suuxdinta, awooda uu u leeyahay jirkiisa in la suuxiyo, iyo su’aalo badan oo qofka la waydiiyo si looga taxadaro in qofka uu ka soo kici waayo suuxdinta iyo in aashitada Caloosha ay sambabada soo galaan taas oo keeni karto in neef mareenka uu dhinto qofkana sidaas ku dhinto. Fadlan hala taxadaro walaalaha dadaalaya ee ka shaqeeya Isbitaal Martini nafta dadka mas'uuliyad ayaa idinka saaran, aqoon la’aanta qaar waxay sababi kartaa in qof u dhinto cudur uu ka dawoobi karay hadduu tacadi dhaco. Waxaa ila wadaagay qof xog ogaal ah kana walwalsan xaaladda suuxdinta isbitaal Martini kana gaabsaday in magaciisa warbaahinta loo isticmaalo.
Suuxdinta bukaanada qabo Covid19. Ehelada dad qaar ayaa qabo in suuxdinta la galiyay bukaano ay keeneen isbitaal...
War lagu farxo:
Been fakatay run ma gaarto indeed. Dowladda dhexe helping its citizens.